Izinsiza kusebenza ezidingekayo ekwenzeni iFreeride Skiing - ULLER
Uma sicabanga ngomdlalo wasebusika ngokugqwesa, akungabazeki ukuthi okuza kuqala engqondweni yisikha esizwa kakhulu ngaso ngesikhathi esibandayo sonyaka. Ngaphezulu kwakhe kukhona konke okucatshangwayo okubandakanya ukuzijabulisa, ubumnandi ne-adrenaline exutshwe nobungozi obuthile. Uma ubulokhu unesifiso sokuzama lo mdlalo othandwayo kepha ungakwazanga ukulinga, lapha sikunikeza umhlahlandlela oyisisekelo wokungena kulo mdlalo ngendlela engcono kakhulu.
Yiziphi izikezi okufanele uzithenge? Yini imishini efanele? Yimaphi amathrekhi ahamba phambili? njll ngeminye yemininingwane esikushiyela yona kule ndatshana ukuze uqale umdlalo wakho wazi into ebaluleke kakhulu.
Ekuqaleni, igama elithi ski lalisetshenziselwa ukubhekisa ekuhambeni eqhweni emabhodini amabili, noma kunjalo, lo mdlalo uguquke ngendlela ejulile kangangokuba namuhla kunezitayela ezingaphezu kwezinhlanu ezihluke ngokuphelele zokushushuluza ezinezici zazo. Kulesi sihloko sizokhuluma ngesinye sezigaba ezivelele nezijwayele ukwenziwa okufanele wazi, ikakhulukazi uma usuvele uzijwayeza noma wake wakwenza ukushushuluza: i-freeride.
Kuyini ukushushuluza kwe-freeride?
El i-freeride owaziwa nangokuthi i-off-piste skiing wazalwa ngokuphendula imincintiswano ye-ski eyayivele ikhona futhi nemithetho yayo yayimbi ngokweqile. Le ndlela engenayo imithetho iqukethe ukushibilika eqhweni eliyimpuphu, okungukuthi, i-skier ihamba ngeqhwa eliyintombi nto. Njengoba ingenziwanga emithambekeni, labo abenza lo mdlalo benza kanjalo ngokuwufinyelela ngokusebenzisa amalifti ezihlalo noma ukuhamba ngezinyawo lapho beshiya khona imoto yabo imile ukukhuphuka behamba behla ngejubane eligcwele ngezithwathwa zabo.
Uhlu lwemishini ephelele
Kufanele wazi ukuthi isitayela ngasinye sokushushuluza kuyadingeka ukusebenzisa imishini ehlukile. Kule ndlela ethile kufanele usebenzise ama-skis anezikebhe ezibanzi kunokujwayelekile ukugcina ukuzinza okukhulu kakhulu futhi ngaleyo ndlela kube lula ukuwela iqhwa lempuphu bese uhamba ngejubane elisheshayo. Enye yezingqinamba zale skis ukuthi zenzelwe ukwehlela eqhweni elingashintshi, okusho ukuthi, alinyathelwa, kepha kungenzeka ukuthi othile usevele udlule indlela efanayo ngaphambi kwakho.
Ukukunikeza umbono wokuthi udinga ini ngokushibilika eqhweni, sikushiyela uhlu lwayo yonke imininingwane okufanele uyicabangele lapho uthenga.
Isilinganiso se- i-roller skate Lolu hlobo lwama-skis lungaqala kusuka kumamilimitha angama-95 kuya kumamilimitha ayi-140. Kule ndlela, into ebaluleke kakhulu okufanele uyinake izohlala iyizinga lokuphepha imishini yakho ekuhlinzeka ngalo.
Kubalulekile ukuthi unake ukuthi uma ushibilika ngokushelela, kuzokubiza kakhulu ukushintshana nokujwayela indawo abanye asebevele behamba kuyo.
I-Las amatafula Lawo skis wokuma angatholakala ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ngefayela le- indlela enqenqemeni (uhlangothi olunqunyiwe) olubizwa nangokuthi ukudweba noma ubukhulu ngendlela eqondile kepha futhi ngendlela eyimidwebo phakathi kwe-spatula nomsila ovame ukubanzi kunengxenye engaphambili. Kukhona futhi i-camber ehlukene noma ukugobeka kwamaskis okuzivumelanisa kangcono ngokuya ngendawo; kwakhe i-freeride kungcono ukusebenzisa i-camber ephikisiwe njengoba i-flotation ilula. Ukuma kwaleli camber kufana nelikabhanana, ngoba maphakathi nendawo kuphela okushushuluza okuthinta phansi, kanti imikhawulo ayithinti, kepha ihlala emoyeni.
Uma wake wezwa ngaye umculi we-rock wamazishi futhi awuqondanga lutho, yehlisa umoya, lapha sikuchaza ngendlela elula. I-rocker ingukuziphendukela kwemvelo okutholwe yi-ski tip futhi ukuphakama kwayo ekuqaleni, okungukuthi, ihlala njalo emoyeni, ngaleyo ndlela iyivimba ukuthi ingahlangani neqhwa eliqinile. Lokhu kwenza kube lula ukungena nokuphuma emakhoneni eqhweni.
Okunye okushushuluza okudala
Njengenye indlela yalesi simo futhi uma ufuna ukuzama okusha, ukusetshenziswa kwama-skis wokuvakasha nakho kuzosiza kakhulu. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukubheka ezinye zezinto ezifana nesisindo sakho ekugcineni okuzoba esinye sezihluthulelo zokuthi uwuthokozele lo mdlalo ngokugcwele futhi ngaphandle kokuphazamiseka. Uma ama-skis owathengayo enesisindo esikhulu azofana kakhulu ne-skis ye i-freeride ngakho-ke isipiliyoni sizofana noma okungenani sifane kakhulu, ngenkathi uma lokho okuthengayo kulula, ukukhuphuka okwenzayo kuzoba lula, kepha ngeke ube nokuhlangenwe nakho okufanayo nokwenziwe i-freeride. Njengamanje nangayo yonke intuthuko evela usuku nosuku kubuchwepheshe balo mdlalo, kunama-skis abiziwayo ukuzithokozisa inhloso kabani ukuthi ujabulele imizwa ye-freeride kepha wenze ukukhuphuka kwakho kungakhathali futhi ngaleyo ndlela ube nokuhamba phambili kwemihlaba yomibili.
Ukuzilolonga i-freeride Ngendlela ephephe kunazo zonke, kufanele uqonde ukuthi konke okwenzekayo kungaphansi kwesibopho sakho, ngakho-ke kuzodingeka unakekele noma isiphi isimo ngokwakho futhi ubhekane naso ngendlela engcono kakhulu, sichaza yonke imishini oyodinga ngaphezu kwama-skis
Njenganoma yimuphi omunye umdlalo wasebusika, kufanele ugqoke izingubo ezishisayo. Uzobekwa esimweni sezulu esibi kakhulu, ngakho-ke kuzodingeka ukugcina umzimba wakho ujwayelene kepha kukuvumela ukuthi unyakaze futhi ujuluke.
Una Isikibha nezingubo zangaphansi zobuchwepheshe, enye yalezi ezinamathela emzimbeni wakho ilungele ukugcina umzimba wakho womile ngaphandle kokujuluka. Ngaphezulu, ungasebenzisa ifayela le- ijakhethi yesoftshell namabhulukweZiyasebenziseka, zigcina umzimba ufudumele, zivikele emanzini futhi zikuvumela nokujuluka. A Ijazi lasebusika, Vumela umoya unqume, khumbula ukuthi uzobe ubhekene nezikhukhula eziqinile zasentabeni. Abanye amabhulukwe egobolondo, ezingangenwa ngamanzi futhi ezenza kube lula ukuhamba.
Vikela ikhanda lakho
Ukusetshenziswa kwe isigqoko sokuzivikela kubaluleke kakhulu, ukuwa lapho uhlushwa khona ekhanda kungaba yingozi. Futhi, eqhweni eliyintombi ubungozi obukhulu ukuthi ngeke ubonakale ngaphezu kwamatshe. Qiniseka ukuthi isigqoko sokuzivikela osithengayo siqinile futhi sivulekile.
El buff Yile ndwangu esetshenziselwa ukumboza ikhanda, impumulo nezindlebe, ngokunjalo nomoya ongena emaphashini akho uzoshisa.
La imaski yeqhwa nezibuko zokushushuluza eqhweni. Lesi sesekeli sokuphepha kungaba yinto yokugcina oyikhumbulayo kepha ekugcineni yiyona ebaluleke kakhulu. Uma ungavikeli amehlo akho, ngeke ube nokubonakala ngakho-ke ungathola ingozi ngeshwa.
Ku-Uller ungathola izinhlobo eziningi ze- buso beqhwa y ukushushuluza izibuko yamadizayini ahlukene, into ebalulekile lapha ukuthi yikuphi kubo okukhiqiza induduzo eyengeziwe.
Endabeni i-freeride ski, into ebaluleke kakhulu ukuthi usebenzise imaski yokushushuluza yesithombe, njengeqoqo Avalanche kusuka ku-Uller, amalensi ayo we-photochromic azivumelanisa ngokuzenzakalela nezinguquko ekukhanyeni ngemizuzwana engaphansi kwemibili, esuka kwizimo ezikhanyayo ze-CAT 2 kuya kuzimo zokukhanya eziphansi ze-CAT 3. Uzolithola kanjani isivinini esikhulu kuma-descents, lolu hlobo lwezibuko lukulungele ngoba lulingana kakhulu kahle ngenxa yesigqoko sakho ngenxa yesistimu yaso yokulwa nesiliphu, ngaleyo ndlela ugweme ukuyeka ukulungisa izibuko noma ukushintsha izingilazi.
Izinsiza zokuphepha uma kwenzeka kwehla noma izingozi:
I-ARVA iyithuluzi lokusesha lezisulu ze-avalanche. Kubalulekile futhi ukuthi uphathe uphenyo noma unamathele esikhonkosini futhi wazi ukuthi isisulu sijule kangakanani, ifosholo lokususa inani elikhulu kakhulu leqhwa, ubhaka wokulwa ne-avalanche ofakwe i-airbag system oyisebenzisayo ngokudonsa intambo eyodwa , i-GPS, ama-walkie-talkies futhi nempahla yosizo lokuqala kuzoba amathuluzi abalulekile okufanele uhambe nawo uma uyozilolonga nalo msebenzi.
Lawa madivayisi acacile futhi ukusetshenziswa kwawo kufanele kufundwe ngaphambi kokwenza lo mdlalo, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uthathe izifundo ozozifunda ngaphambi kokuba ulungele ukuzijwayeza.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyazi uma ungena kulo mdlalo ukuthi akusilo i-ski sabaqalayo ngoba lapho ukushushuluza ezindaweni lapho kutholakala khona ukufinyelela kuphela, ulwazi oludingekayo lukhulu, ngaphezu kwalokho, isimo somzimba naso kubalulekile ukuze ukwazi ukukhuphukela endaweni lapho ukwehla kuqala khona. Ngakho-ke, uma ungakaze uzijwayeze lo mdlalo, kodwa nje isimo se- i-freeride nguyena okuheha, sincoma ukuthi uqale ungene ezweni lokushushuluza ngokujwayelekile futhi usebenzise indlela elula ekulungiselela ukuthi weqe kulokhu, okunzima kakhulu futhi okunobungozi obukhulu.
Imithambeka engcono kakhulu ye-freeride
Uma ngemuva kokukutshela ukuthi konke lokhu kumayelana nani, uziqinisekisile ukuthi lo mdlalo ungowakho, nalu uhlu olunezingoma ezihamba phambili eSpain ongazilolonga i-freeride kanti ezinye eYurophu uma kwenzeka uhlela ukuthatha uhambo eholidini lakho elilandelayo lasebusika.
Uma sifuna ukuhlala eSpain futhi sijabulele okuhle kakhulu i-freeride, lapho-ke ungakwenza ku:
I-Baqueira Beret - Vall d´ Aran
EPyrenees eseduzane neLleida futhi ukuma kwayo kuvumela unyaka nonyaka ukushuba kweqhwa kungaphezu kokugculisayo. Abagibeli abaningi bezinga njengo-Aymar Navarro banendawo yabo lapha ngenxa yezinsika ezinkulu ezikhona.
I-Pic du midi - iPyrenees
Ngekhadi leposi le-Pic du midi Observatory ngemuva kwethu, ukwehla kuqala lapho ungajabulela khona izindlela ezahlukahlukene ezahlukahlukene, kepha uma uzijwayeza lapha, khumbula ukuthi izindlela azimakiwe noma azifakwanga umshwalense.
Uma ufuna ukuhambela leli zwekazi, siphakamisa ezinye izindawo ezinedumela elihle kakhulu lokwenza lo mdlalo:
I-Chamonix - Montblanc (eFrance)
Ingenye yezindawo ezishushuluza kakhulu emhlabeni futhi indlela yakudala ukuthatha imoto yekhebula i-Aiguille du Midi bese wehlela eMer de glace. Vele, kubalulekile ukukwenza nge-umhlahlandlela, ngoba inani lamaqhwa eqhwa akhona angaguqula usuku lwakho lube yingozi.
I-La Grave (France)
Futhi eFrance, singaya endaweni yaseHautes-Alpes-Isére e-Alps yaseFrance futhi sijabulele iLa Grave, okungeyona ithrekhi uqobo lwayo, kepha kunalokho ukukhuphuka kwe-ski okuholela endaweni ye-freeride. Kuyaziwa njenge-mecca yalesi simo. Kunconywa kakhulu ukuthi kwenziwe nomhlahlandlela ngenxa yobukhona bemifantu efihliwe ekhiqizwa izinguzunga zeqhwa.
Ngenye yezindawo ezinhle kakhulu nendawo ekhethelwe ukubungaza iFreeride World Tour minyaka yonke. Ubuso basenyakatho beMount Bec de Roses yindawo eyedlulele kakhulu futhi nalapho kwenziwa khona lesi sifunda.
Kuyinto iqoqo leziqhingi lapho kungekho khona izinkomba. Okuvame ukwenziwa ukukhuphuka ngezikezi zokuvakasha usuka ezingeni lolwandle uye engqungqutheleni bese wehla ngomgwaqo othanda kakhulu umgibeli.
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana nokushushuluza kwe-freeride
Ukushushuluza eFreeride kusho ukushushuluza e-off-piste futhi okubandakanya ukushibilika eqhweni lempuphu ngaphandle kokubheka noma yiluphi uhlobo lwemithetho.
Imiphi imishini oyidingayo ukuze wenze ukushushuluza kwe-freeride?
Ukwenza ski i-freeride Uzodinga izingubo ezifanele ezifana namabhulukwe eqhwa, ibhantshi lasebusika nezibuko, kodwa futhi neminye imishini yanoma yikuphi ukudilika okungenzeka okufana ne-GPS, ifosholo, ubhaka wokulwa ne-avalanche, njll.
Yiziphi izinhlobo zama-skis akhona?
Ngokuya ngesimo okhetha ukusisebenzisa, uzosebenzisa ama-skis ahlukile. Izinhlobo ezivame kakhulu yilezi ukushibilika eqhweni de i-freeride, i-alpine noma i-piste skis, ukushibilika eqhweni de i-freestyle kanye nokushushuluza kwama-skis phakathi kwabanye.